सानिमाको आइपीओ भोली बाँडिने, कति जनाले पाउँदैछन शेयर ? - Jyotinews
सानिमाको आइपीओ भोली बाँडिने, कति जनाले पाउँदैछन शेयर ?
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज २९ गते १४:२७
२९ असोज, काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको प्राथमिक साधारण सेयर (आईपीओ) असोज ३० शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटले यस कम्पनीको आईपीओ प्रिअलोटमेन्ट बुधबार गरिसकेको छ । पूर्ण बाँडफाँड भने धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको कुल ३० लाख कित्ता साधारण सेयरमध्ये एक लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको हो ।
कम्पनीले असोज २१ देखि २५ सम्म सर्वसाधारणका लागि २७ लाख ३० हजार कित्ता सेयर बिक्रीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । त्यसमा आठ लाख ८३ हजार ६२३ जनाबाट एक करोड ९० लाख १२ हजार ३४० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जारी पुँजी एक अर्ब रहेको छ । सर्वसाधारणलाई जारी गरेको सेयर बिक्री पछि यसको पुँजी एक अर्ब पुग्ने भएको छ । गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.६६ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १०६.३९ रहेको छ । भरतपुर । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको प्राथमिक साधारण सेयर (आईपीओ) असोज ३० शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ ।
कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटले यस कम्पनीको आईपीओ प्रिअलोटमेन्ट बुधबार गरिसकेको छ । पूर्ण बाँडफाँड भने धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको कुल ३० लाख कित्ता साधारण सेयरमध्ये एक लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको हो । कम्पनीले असोज २१ देखि २५ सम्म सर्वसाधारणका लागि २७ लाख ३० हजार कित्ता सेयर बिक्रीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । त्यसमा आठ लाख ८३ हजार ६२३ जनाबाट एक करोड ९० लाख १२ हजार ३४० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जारी पुँजी एक अर्ब रहेको छ । सर्वसाधारणलाई जारी गरेको सेयर बिक्री पछि यसको पुँजी एक अर्ब पुग्ने भएको छ । गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.६६ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १०६.३९ रहेको छ ।
बागलुङको बलेवामा प्याराग्लाइडिङ: संरचना छ, उडान छैन